Ukusoka - hhayi nje yigama lezokwelapha. Kuba yisikhathi futhi lapho isiko eminyaka ubudala zokuthi sihlehlela emuva ayizinkulungwane amaningana eminyaka adlule. Futhi namhlanje, ukususwa kwejwabu ezingabantu - kuyisenzakalo esibalulekile, elalenziwa kwabanye abantu. Ngakho lokho nokusoka akukhona? Lesi sihloko Kuzoxoxwa ngani esihlokweni.
Kuyini ukusoka? Umlando omncane
Ukusoka noma ukusoka - kuba impela uyisiko elingasho ezibalulekile. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala ebhaliwe isiko enjalo basonta 2300 BC. Kuyinto sihlehlela sikhathi isithombe odongeni omunye Emathuneni asendulo aseGibhithe, lapho le nqubo kuboniswa. Isiko elifanayo banamathela abaseFenike namanye izizwe. Lapha, njengomuntu isiko kwakusho entry womfana ungene kwimpilo yobudala futhi wafakaza ukuthi avunyelwe ukushada.
Kuyinto imfihlo ukuthi ukusoka - kuyingxenye ebalulekile isiko lamaJuda. Ngempela, imibhalo waseBhayibhelini zikubeka ngokucacile kakhulu ukuba yilowo nalowo mlisa okuqondene "abantu abakhethiwe", kufanele usike. Abangasokile infidels futhi kubhekwe, kwakungafanele athole ukuya kuNkulunkulu.
Ukusoka for Muslims - kubuye isiko sasivumela ubudala. Lapha, le nqubo yenziwa ngenjongo yokukhulekela. Ngakho, umuntu likwenza kucace ukuthi ulandela izimiso inhlanzeko yomuntu siqu nokuhlanzeka, okuyinto ngesikhathi esisodwa zimisiwe profethi yena.
By endleleni, le nqubo ibizwa eyayiqhutshwa nezizwe zamaNdiya ezazisele eMelika Ephakathi. Ngaphezu kwalokho, leli siko kangaka abantu Afrika. Lo mkhuba kwakusho nokuzalwa kabusha kuka-a ebudvodzeni. Kuyathakazelisa ukuthi amanye amalungu izizwe zase-Afrika kuthiwa wanquma ijwabu nge isikhwama esincane.
Ngokuhamba kwesikhathi, lo mkhuba uye esabalala Europe. Kodwa, bheka kwakungeyena kangaka zenkolo njengoba ngezizathu zezokwelapha futhi kwenziwe ngenxa yezizathu kwenhlanzeko.
Yini ukusoka, kanye uma kwenziwe?
Empeleni, isikhathi ezihlukene emasikweni ahlukene. Ngokwesibonelo, abaseGibhithe lasendulo ukusoka eyenziwa ubudala engu-14 lo mfana ezinye ukuqashelwa zokuthomba yakhe. Emazweni Muslim boys ibhekane inqubo abaneminyaka ephakathi kwengu-7 kuya ku-10, ngoba lapho ingane kakade Angathandazela bebodwa. Nakuba kungenzeka ukusoka okwenziwa nganoma isiphi esinye isikhathi.
A ukusoka Jewish ngokuvamile eyenziwa ngosuku lwesishiyagalombili emva kokuzalwa. Ziningi izincazelo kungani kubalulekile ukuba ulinde izinsuku 8. Kunoma yikuphi, futhi phakathi naleso sikhathi ingane nonina uyalulama ngokwanele kusukela ekuzalweni. By endleleni, uma ingane ibuthakathaka kakhulu noma egula, umkhuba kungenziwa lihlehlisiwe.
Ukusoka kufanele agcinwe kule ntambama, futhi okuhle kunakho konke - emva umthandazo ekuseni. Ngaleso sikhathi, umkhuba wawenziwa kuphela esinagogeni, kodwa kuze kube manje, le nqubo engenziwa ekhaya, kodwa khona 13 omdala amadoda angamaJuda. Kuyaphawuleka ukuthi usuku ukusoka - uswidi Okuyınqo, umcimbi omkhulu kuwo wonke umndeni.
Kunoma ikuphi, le nqubo engenziwa ngasiphi yobudala, lapho abantu babe nokholo.
Kuyini ukusokwa kusuka umbono wezokwelapha?
Ngokuqondene umbono lodokotela ngezithukuthuku lokusoka mass sezinkolelo wezenkolo noma womphakathi, zingabantu edidayo kakhulu. Abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi lokhu kunciphisa ingozi yomdlavuza penile , noma kunciphisa ematfuba ekubambeni esithathelwanayo isifo Venereal. Kunoma ikuphi, ngesikhathi operation evamile yokusoka umzimba akuyona ngempela.
Nokho, kukhona eziningi izifo nezinkinga zempilo ekuthuthukiseni uhlelo zokuzala, phakathi kwesikhathi lapho ukusoka Kwenziwa ngezizathu zezokwelapha futhi iyingxenye esiyisibopho ukwelashwa. Ngokwesibonelo, isifo lalivamile kubhekwa phimosis, okuyinto kuhambisana ukuvaleka ijwabu. ukusokwa kwabesilisa futhi ingxenye ekwelapheni balanitis.
Xenophobia - kungaba isifo Russia zanamuhla?
Lo mkhuba - yaso ngoba sikholelwa komuntu esikhathini yokungafi komphefumulo
Amateur radio Manual Beginner sika: kanjani ukuhlola FET
Umphetho imfushane kakhulu - i-elementi esisemqoka ikhabethe onesibindi wentombazane
Aphathekayo: lesilinganiso. Sha ethandwa kakhulu, izici zabo